Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska Oo Ka Hadlay Falkii Taageerayaasha Chelsea Sameeyeen Xallay
HomeChampions LeagueRa’iisal Wasaaraha Ingiriiska Oo Ka Hadlay Falkii Taageerayaasha Chelsea Sameeyeen Xallay
Ra’iisal wasaaraha wadanka Ingiriiska, David Cameron ayaa wax laga xumaado iyo talaabo foolxun oo wax ka qabasho u baahan ku tilmaamay falkii taageerayaasha Chelsea kula kaceen ninka Madow ee tareenka ka raacayay Istaan caasimada Paris ku yaala xallay.
“Waa fal u eg mid waxashnimo ah,” ayuu yidhi Ra’iisal wasaaruhu “Waa talaabo dambi cad oo faraha lagula jiro muujinaysa sidaas darteedna anigu waxaan hubaa in ciidamada Booliiska wadanka Faransiisku ay si qoto dheer u baadhi doonaan.
“Waxaan ogohay in Booliiska Ingiriisku ay siin doonaan caawimo kasta oo ay uga baahdaan . Waxa kale oon ku rajo weynahay in Chelsea ay kala shaqayn doonto arintaas si buuxda. Arintani waa mid aad iyo aad iyo aad khatar u ah oo ina saamaynaysa.”
Halkan Ka Daawo Dhacdadii Cunsuriyiinta Chelsea Ku Kaceen Oo Muuqaal Ah
Barcelona Oo Ku Guuleysatay Koobka Aduunka Naadiyada + Sawiro / Video
Juventus-Crotone 3-0 ★ All Goals & Highlights HD ★ Serie A
Manchester United, PSG iyo Juventus Oo Ku Hirdamaya Xiddiga Real Madrid Ee James Rodriguez